STAAR चेतावनी को मिशन एक आपतकालिन को स्थिति मा सहयोग को लागी पहुँच प्रदान गर्न छ, औषधि त्रुटिहरु लाई रोक्न र टेक्नोलोजी प्रदान गर्न को लागी तपाइँको स्वास्थ्य निगरानी र ट्र्याक गर्न।
प्रक्रिया प्रमाणित गर्नुहोस्
क्लास टेक्नोलोजीमा उत्तम
टेक्नोलोजी - एक आकार सबै फिट हुँदैन
व्यक्तिगत आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (PERS) तपाईंको बिरामी र ग्राहकहरूलाई सुरक्षा, सुरक्षा र प्रत्यक्ष जीवन सुरक्षा निगरानी अपरेटरको घरमा वा हिडिरहेको बेलामा पहुँच प्रदान गर्दछ। हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरु दिनको २ 24 घन्टा उपलब्ध छन् प्रत्येक स्थितिको मूल्यांकन गर्न र सुनिश्चित गर्न को लागी उचित स्तर प्रदान गरिएको छ। हाम्रो प्रस्तावमा परम्परागत, सेलुलर र मोबाइल / GPS PERS, साथ साथै नयाँ टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरू जस्तै PERS स्मार्ट फोन अनुप्रयोगहरू र स्वचालित गिरावट पत्ता लगाउँदछन्।
हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण साइन टेलिहेल्थ उपकरणहरूको साथ व्यक्तिगत इन-होम रिमोट बिरामी निगरानी कार्यक्रम लागू गर्न लागत-प्रभावी र अनुकूलन दृष्टिकोण प्रदान गर्न हो । तपाईंको आवश्यकताहरू उपलब्ध विकल्पहरू र रिपोर्टहरू (जस्तै तौल, रक्तचाप, पल्स बैल, रगत ग्लुकोज र अधिक) मापन गर्न हाम्रो क्षमताले राम्रो हेरचाह, राम्रो परिणामहरू र उच्च दक्षता हासिल गर्न मद्दत गर्दछ।
मेडिकल रेजिन्सको पालना नगरी अस्पताल भर्ना, पढाइ र नर्सि home होम प्लेसमेन्टको प्रमुख कारण हो। कुल to० देखि percent० प्रतिशत पढाइहरू औषधी गैर पालना र प्रतिकूल घटनाहरूको कारण हुन सक्छ। निगरानी गरिएको औषधि प्रबन्धन र हाम्रो प्रमाणित प्रक्रिया प्रक्रियामा १ years बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ , हामीले एक औषधी अनुपालन दर percent ० प्रतिशतभन्दा बढीको औसत हासिल गरेका छौं र अस्पताल र नर्सि home होम (पुनः) प्रवेशमा नाटकीय कटौती देखाएको छ।
अनुगमन - उल सूचीबद्ध केन्द्रीय स्टेशन
हाम्रो जीवन सुरक्षा निगरानी (LSM) केन्द्र हाम्रो पूरै प्लेटफर्मको पर्दाको पछाडि हो। LSM उल सूचीबद्ध र निगरानी संघ (TMA) का एक सदस्य हो, दुबै दुबै गुणवत्ता, अनावश्यक, र संचालन र पूर्वाधारको प्रशिक्षण को लागी उद्योग मापदण्डहरु लाई मान्यता दिन्छ। LSM बाहिरी अवरोधहरू जस्तै विद्युत आउटसेज वा प्राकृतिक प्रकोपहरूको बावजुद उपकरण सक्रियणहरूको प्रतिक्रियामा कुनै डाउनटाइम सुनिश्चित गर्दछ।
STAAR अलर्ट हाम्रो लाइफ सुरक्षा निगरानी केन्द्रको उन्नत सफ्टवेयर प्लेटफर्म मार्फत सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक डाटा एकीकरण (EDI) र इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रेकर्ड (EHR) हस्तान्तरण प्रदान गर्दछ। STAAR चेतावनी को घर फार्म घर उपकरण मेडिकल टेक्नोलोजी को प्रत्येक फार्म पेशेवर अनुगमन को एक उन्नत स्तर प्रदान गर्दछ। प्रत्येक उपकरणबाट संकेतहरू स्वचालित रूपमा सर्भरहरू र TMA पेशेवर अपरेटरहरूलाई STAAR अलर्टको जीवन सुरक्षा निगरानी केन्द्रमा पठाइन्छ , सबै सूचनाहरू वास्तविक समयमा प्रबन्धित गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर।
मेडिकेड छूट, डुअल योग्य प्रदायकको रूपमा हाम्रो २ 25 वर्ष भन्दा बढीको अनुभव र सहभागिताले हाम्रो निगरानी र रिपोर्टि processes प्रक्रियाहरू जाँचेर परिमार्जित गरेको छ। हाम्रो टेक्नोलोजी र सेवाको वर्कफ्लोमा अनुकूलन गरिएको छ जुन तपाईं पहिले नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न हामी तपाईंसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छौं। बिरामीहरू, ग्राहकहरू, र प्रदायकहरूको घर र अफ-साइट दुबै ब्याकइन्ड सेवा समर्थन र स्वास्थ्य पोर्टलमा पहुँच छ। हामी एक टेक्नोलोजी, रखरखाव, र प्रत्यक्ष ग्राहक शिक्षा एक सुव्यवस्थित र nonintrusive अनुभव ग्यारेन्टी प्रदान प्रदान गर्दछ।
STAAR अलर्टमा, हामी हाम्रो साझेदारहरूलाई उनीहरूका बिरामीहरू वा ग्राहकहरूको बारेमा उचित जानकारी प्रदान गर्न प्रयास गर्दछौं। हामी बुझ्दछौं कि तपाईको काम कर्तव्यहरू र रिपोर्टिंग आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि आवश्यक जानकारी मात्र डेलिभर गर्नाले समयको बचत हुन्छ र उचित हेरचाह सुनिश्चित गर्दछ। रिपोर्टले प्रमाण-आधारित परिणामहरू प्रदान गर्दछ - जस्तै चिकित्सा सतर्कता गतिविधिहरू, औषधि पालन दर, अत्यावश्यक साइन मापन, र अधिक - तपाईंको इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिकर्डमा एकीकृत गर्न सकिन्छ।
हाम्रो मान्छे - तपाईंको ख्याल राख्नुहुन्छ
हामी काममा आउँछौं किनकि
हामी तपाईंको ख्याल राख्छौं!
२ 25 भन्दा बढी बर्षदेखि, स्थानीय इन-फिल्ड टेक्निकल समर्थन र ग्राहक सेवा कर्मचारीहरूले हाम्रा ग्राहकहरू र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको घरमा सेवा गरिरहेका छन्। तिनीहरू दिनको २, घण्टा उपभोक्ता, परिवार, र पेशेवरहरूबाट आएका चिन्ताको समाधान गर्न उपलब्ध छन्। हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरू अनुगमन संघ (TMA) द्वारा स्थापित प्रशिक्षण र परिचालन मानकहरू पूरा गर्दछन्।
ग्राहक केयर टीम
सेवा भनेको हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्दछ। हाम्रो प्रशिक्षित टेक्नीशियनहरू बन्धन राखिएको छ र सेवा, स्थापना, र हाम्रो उपकरणहरूको पुनःप्राप्ति प्रदर्शन गर्न बीमा गरिएको छ। तिनीहरूसँग समस्या निवारण गर्न र उत्पन्न हुने कुनै समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता छ। तिनीहरू यहाँ छन् तपाईंको सबै उपकरणको आवश्यकताहरू सम्हाल्न मद्दत गर्न!
हाम्रो ग्राहकहरुलाई उत्तम समग्र अनुभव प्रदान गर्नु हाम्रो उत्कट चाहना हो। हामी कुनै पनि सुरक्षा, स्वास्थ्य, र औषधि व्यवस्थापन सम्बन्धित मुद्दाहरूको साथ हाम्रा ग्राहकहरूको मद्दतको लागि तयार काम गर्न आएका छौं। हाम्रो प्रबन्धकहरूले नेतृत्व गर्न ड्राइवको साथ टोलीहरू सिर्जना गरे। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई सुरक्षित, सुरक्षित, र खुसी राख्न सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू राख्न चाहन्छौं।
हाम्रो लाइभ सुरक्षा अपरेटरहरू उपलब्ध सबै भन्दा पेशेवर निगरानी सेवा हुन कोसिस गर्छन्। हामी हाम्रा अपरेटरहरूलाई ग्राहक सेवा र जीवन सुरक्षा प्रणालीहरूको व्यावसायिक अनुगमनमा फोकस गर्न तालिम दिन्छौं। तिनीहरूको विशेषता दुई तर्फी आवाज निगरानी र रिपोर्टि। हो। हामी लगातार बारलाई उच्च माध्यमिक रूपमा उद्योग मा सेट गरिरहेको छ र निगरानी संघ द्वारा पाँच डायमंड पदनामबाट सम्मानित गरिएको छ।
१ Medic बर्ष भन्दा बढिमा मेडिकेड छुट र मेडिकेयर डुअल ई योग्य प्रदाताको रूपमा, हामीले केयर व्यवस्थापन र सेवा समन्वय संस्थाहरूको कार्यप्रवाहको साथ पign्क्तिबद्ध गर्न हाम्रा प्रक्रियाहरू विकसित गरेका छौं। हामी घर सेटिंग मा जनसंख्या स्वास्थ्य प्रबंधन को लागी लागत प्रभावी समाधान प्रदान गर्दछ।
हामी बुझ्दछौं कि तपाईको सहभागी जनसंख्याको स्वास्थ्य सुधार गर्नु र उनीहरूलाई घरमा बस्न दिनु एक नम्बर प्राथमिकता हो। हाम्रो मेडिकल उपकरण टेक्नोलोजी सुटले कागजात, ट्र्याक गर्न, र तपाईंको सहभागीहरूको स्वास्थ्य डाटा रिपोर्ट गर्न मद्दत गर्दछ। यसले उनीहरूलाई आफ्नै घरमै रहने छनौट गर्न र अर्को तहको देखभालबाट टाढा रहन, परिणामस्वरूप नियन्त्रण लागत र सदस्यको सन्तुष्टि बढ्नेछ।
तपाईका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न विकल्पहरू प्रदान गरेर उनीहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्न अनुमति दिनुहोस् जुन उनीहरूको स्वतन्त्र बस्ने वातावरणमा उनीहरूलाई सुरक्षित र सुरक्षित राख्दछ। हाम्रो उन्नत टेक्नोलोजीको प्रमाणित सूटले समग्र सुरक्षा, पालन, स्वास्थ्य र स्वास्थ्यतर्फ वृद्धि भएको छ जहाँ एक निवासीले सहयोगको लागि बोलाउँदछ।
व्यक्तिगत जीवित CCRC
हाम्रो स्केलेबल टेक्नोलोजी सुइटले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहक सदस्य आधारमा विस्तारित छुट सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। दुबै इन-होम र मोबाइल उपकरण विकल्पहरूको साथ तपाईंको ग्राहकहरूको सशक्तिकरण गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरू स्वस्थ र सकेसम्म लामो समयसम्म सक्रिय रहनेछन्।
ग्रुप खरीद संस्था